भोलि १० गते सवारी आवातजावत बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो? – Khabar Silo
भोलि १० गते सवारी आवातजावत बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनका दिन नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सवारीसाधन चल्न रोक लाग्ने भएको छ । मानिसको चाप बढी हुने भएपछि व्यवस्थापन सहजका लागि सवारीसाधनमा रोक लगाइएको हो ।
आयोजकले २० स्थानमा डिस्प्ले बोर्ड राख्ने भएकाले सहभागीले गाडी रोकिने ठाउँ आसपासका बोर्डबाट समेत कार्यक्रम हेर्न पाउनेछन् । तामाङले भने, “यसले गर्दा कार्यक्रमस्थलको भीड कम हुन्छ ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीका अनुसार सो दिन सुरक्षा प्रबन्धको सबै खालको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
झापाको धुलाबारीस्थित मेची आम्दा अस्पताल सिल
झापा – मेची आम्दा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमा कोरोना पोजेटिभ भएपछि अस्पताल सिल गरिएको छ । मेचीनगर–१० धुलाबारीमा रहेको सो अस्पतालको सबै सेवा बुधबारदेखि बन्द गरेर सिल गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । हाल ती डाक्टरलाई व्यवस्थितरुपमा अस्पतालकै माथ्लो तलाको कोठामा आइसोलेशनमा राखिएको छ । मेचीनगरमा चिकित्सकलाई पहिलोपटक र समुदायमा दोस्रोपटक कोरोनाको सङ्क्रमण फेला परेको हो । […]
काठमाडौं, २४ असोज / कतारले नेपाल सरकारलाई घरेलु श्रमिकका रुपमा नेपाली कामार लैजाने इच्छा व्यक्त गरेको छ । यसअघि पनि कतारले नेपाबाट घरेलु कामदार लैजाने इच्छा व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई कामदार लौजाने बिषयमा सम्झौता गर्न आग्रह गरेको थियो । कतारले अन्य औपचारिक रुपमा लाँदै गरेको कमदार जसरी नै घरेलु क्षेत्रका लागि पनि कमदार लैजान लागेको […]
धार्मिक मान्यता अनुसार बिहिबारका दिनमा जन्मेका मानिसको भाग्य कस्तो ? जानकारी लिनुहोस
१८ वर्षीया किशोरी सुजितासँगै तीन जना युवक कोठाभित्र स’मातिए